ဘဝဆိုတာ ထင်တားတာနဲ့ လက်တွေ့နဲ့ ထပ်တူမကျကြောင်း သူမရဲ့အဖြစ်လေးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် – Suehninsi
ဘဝဆိုတာ ထင်တားတာနဲ့ လက်တွေ့နဲ့ ထပ်တူမကျကြောင်း သူမရဲ့အဖြစ်လေးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
Sue | August 6, 2020 | ရသစုံ | No Comments
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ သူမရဲ့ အနုပညာသက်တမ်း နှစ်(၂၀)ကျော်အတွင်းမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေကိုသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က လက်ရှိ အသက်လေးဆယ်ကျော်သည့်တိုင် အောင်မြင်မှုတွေများစွာကို သိမ်းပိုင်နိုင်ထားပြီး ထိပ်တန်းမင်းသမီးအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ
အတွေ့အကြုံတွေများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ဒီကနေ့မှာတော့ ထင်ထားသမျှက ထပ်တူမကျနိုင်တဲ့အကြောင်း သူမရဲ့အဖြစ်လေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးပြောပြလာပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က “တခါတရံမှာ အဆင်ပြေနေတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ အဆင်ပြေမနေပြန်ဘူး။ အဆင်မပြေဘူးလို့
ထင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကလဲ တခါတလေမှာ အဆင်ပြေနေတတ်ပြန်တယ်။ Purple ကကျွန်မနဲ့လိုက်လား….(သိပ်မဝတ်ဖြစ်တဲ့အရောင်မို့လို့)” ဆိုပြီး သူမနဲ့ သိပ်မလိုက်ဖူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ ခရမ်းရောင်လေးကို မဝတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကို နမူနာပြပြီး ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ သူမကိုယ်တိုင် ခရမ်းရောင်လေးနဲ့
မလိုက်ဖက်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်ဝတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အရမ်းကြည့်ကောင်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ လှပနေတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အိန်ဒွာကြျောဇငျကတော့ သူမရဲ့ အနုပညာသကျတမျး နှဈ(၂၀)ကြျောအတှငျးမှာ အောငျမွငျကြျောကွားမှုတှကေိုသာ ရရှိပိုငျဆိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒွာကြျောဇငျက လကျရှိ အသကျလေးဆယျကြျောသညျ့တိုငျ အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာကို သိမျးပိုငျနိုငျထားပွီး ထိပျတနျးမငျးသမီးအဖွဈ ဆကျလကျရပျတညျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘဝမှာ
အတှအေ့ကွုံတှမြေားစှာကို ဖွတျသနျးခဲ့ပွီးပွီဖွဈတဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျက ဒီကနမှေ့ာတော့ ထငျထားသမြှက ထပျတူမကနြိုငျတဲ့အကွောငျး သူမရဲ့အဖွဈလေးနဲ့ ယှဉျပွီးပွောပွလာပါတယျ။ အိန်ဒွာကြျောဇငျက “တခါတရံမှာ အဆငျပွနေတေယျလို့ ထငျရပမေဲ့ အဆငျပွမေနပွေနျဘူး။ အဆငျမပွဘေူးလို့
ထငျခဲ့တဲ့ အရာတှကေလဲ တခါတလမှော အဆငျပွနေတေတျပွနျတယျ။ Purple ကကြှနျမနဲ့လိုကျလား….(သိပျမဝတျဖွဈတဲ့အရောငျမို့လို့)” ဆိုပွီး သူမနဲ့ သိပျမလိုကျဖူးလို့ထငျခဲ့တဲ့ ခရမျးရောငျလေးကို မဝတျဖွဈခဲ့တဲ့အကွောငျးလေးကို နမူနာပွပွီး ပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒွာကြျောဇငျကတော့ သူမကိုယျတိုငျ ခရမျးရောငျလေးနဲ့
မလိုကျဖကျဘူးလို့ ထငျခဲ့ပမေယျ့ တကယျဝတျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ အရမျးကွညျ့ကောငျးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခရမျးရောငျလေးနဲ့ လှပနတေဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျရဲ့ ပုံရိပျလေးကို သဘောကကြွမယျ ထငျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source : Eaindra Kyaw Zin’s Facebook
ချစ်ဇနီးလေး ရွှေမှုံနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ပါးပါး အပန်းဖြေခရီးလေးထွက်ရင်း အနားယူနေတဲ့ ရွှေထူး
အမေအရင်းတစ်ယောက်လိုချစ်ရတဲ့ ချစ်သူရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားတာကြောင့် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အောန်ဆိုင်း
အလှူနဲ့လက်နဲ့မပြတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးကို သာဓုမခေါ်နိုင်ရင်တောင် မဆဲကြပါနဲ့လို့ ပြောခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် ပါကျဲ
ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်လို့ ဆေးရုံက ဆင်းလာရပြီဖြစ်တဲ့ အမေဖြစ်သူဘေးမှာ တဖဝါးမှ မခွာဘဲ စောင့်ရှောက်ပြုစုပေးနေတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်